Mampitandrina ny Ceni: “Misy ny tetika hanao hosoka amin’ny latsa-bato” | NewsMada
Mampitandrina ny Ceni: “Misy ny tetika hanao hosoka amin’ny latsa-bato”
“Misy feo heno, resaka mandeha tato ho ato: efa misy manao tetika sy paikady hampiasana ireo kara-pifidianana rehetra izay tsy voazara mba hanaovana hosoka amin’izay fampiasana ny zo handatsa-bato izay.”
Fanambaran’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, teny Alarobia ny faramparan’ny herinandro teo io, ny amin’ny mety ho fisian’ny fisandohana ireo kara-pifidianana tsy voazara na tsy alain’ny tompony.
Nampahatsiahivina fa izay olona rehetra, na iza na na iza, mampiasa hosoka na manao fomba tsy ara-dalàna hampiasana ny zo handatsa-bato: melohin’ny lalàna higadra roa ka hatramin’ny dimy taona.
Nambarany fa noho ny antony tsy miankina amin’ny Ceni no nahatonga ireo kara-pifidianana tsy voazara. Efa misy olona maty izy ireo, mbola voasoratra anarana ao anatin’ny lisitry ny mpifidy. Mety misy olona efa lasa nifindra monina izy ireo, nefa mbola ao ny kara-pifidianany.
Ireo kara-pifidianana ireo izany no misy mikononkonona raha ny tatitra azon’ny Ceni: mizara izany any amin’ny olona hafa, ka hampiasaina handatsaham-bato amin’ny andron’ny fifidianana, araka ny fanazavany.
Mila mailo ny tsirairay sy ny rehetra
Inona ny vahaolana amin’izay fisandohana amin’ny fampiasana kara-pifidianana izay? Tsy maintsy mitondra karatra fanamarinana ny mpifidy, fa izy marina no voasoratra ao amin’ny lisi-pifidianana. Na kara-panondro izany, na fahazoana mitondra fiara, na “passeport”.
Na izany aza, “Asaina ny rantsa-mangaikan’ny Ceni rehetra manerana ny Nosy handray ny fepetra rehetra mba hiara-kiasa amin’ny lehiben’ny fokontany amin’ny fizarana ny kara-pifidianana”, hoy ny mpampaka-tenin’ny Ceni, Razafindraibe Ernest.
Efa asaina manara-maso ny amin’izany ny tsirairay avy mba tsy hisian’ny hevi-petsy na hevi-dratsy amin’izay fisandohana kara-pidifianana izay. Efa mampilaza mialoha ny Ceni fa handray ny fepetra arakaraka ny zava-mitranga ary hiara-kiasa amin’ny fitsarana mahefa, raha misy ny alaim-panahy hanao zava-tsy mety.